Dagaalo ka qarxay saakay Magaalada Muqdisho.
Saddex Wariye oo ku dhaawacmay Dagaaladii saakay ka qarxay Muqdisho.
Maalinta Caruurta Afrika oo shalay laga xusey Magaalada Muqdisho
Waxaa wararka isku soo dubariday
June 17, 2009, Muqdisho: Taliyihii ciidanka Booliiska Gobolka Banaadri Gen. Cali Siciid Xasan Wadaad ayaa ku geeriyooday dagaal saakay dhex maray ciidamada Dowladda FKMG iyo Kooxaha ka soo horjeeda, waxa uuna dagaalkaasi xooggiisu ka dhacay Isgoyska KPP iyo tarabuunka.
Sarkaalkaan ayaa dhimashiida waxaa ka soo baxay warar kala duwan, waxayna qaar sheegayaan in sarkaalkaani ay ku dhacday raraas laga soo riday meel fog mar uu marayey Isogyska KPP oo ay ku sugnaayeen ciidamada Dowladda KMG, halkaas oo ah goobtii uu dagaalku ka dhacay.. Waxa jira warar kale oo sheegaya in madfac ku dhacay..
Cali Siciid waxa uu horey u ahaan jiray ciidanka Kumaandooska Soomaaliya, kadibna waxa uu ku biiray Ciidanka Booliiska, gaar ahaan isagoo xilal taliyenimo ka soo qabtay Dowladihii soo maray xiligii dagaalada sokeeye ka socdeen soomaaliya.
Dimashada Taliyahaan ayaa noqoneysa taliyihii ugu horeeyey ee ku geeriyooda dagaalada ka socda magaalada Muqdisho, iyadoo Isbitaalada Magaalada Muqdisho la dhigay iyo 40 qofood oo dagaaladaasi ku dhaawacmay kuwaas oo u badnaa dad rayid ah oo aan waxba galabsan.
Waxaa saakay June 17 dadweynaha Magaalada Muqdisho ku waabareysteen daryanka Madaafiicda ay isweydaarsanayeen ciidamada Dowladda iyo Xarakatul Shabaabul Mujaahidiin iyo Xisbul Islaam oo dhinac ah, waxayna dagaalada xoogoodu k qaraxeen xaafadda Hodan gaar ahaan Tarabuunka iyo isgoyska KPP.
Dagaalka oo ku bilowday hubka darandooriga u dhaca ayaa markii dambe waxa uu isku bedelay in madaafiic la isweydaarsado, waxayna madaafiicdu ku dhaceysay suuqa Bakaaraha iyo agagaarkiisa ayaa waxa ku geeriyooday dad fara badan oo rayid ah oo lagu qiyaasay ilaa iyo 7 qofood, sidoo kalana waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo dhowr iyo toban qofood.
Dagaalkaan ayaan la ogeyn sababihii uu ku bilowday, balse wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Dowladda ay iyagu weerarka bilaabeen kuwaas oo doonayey in ay kooxaha ka soo horjeeda ka qabsadaan goobo ku yaala Xaafadda Hodan, warar kale ayaa waxay sheegayaan in dagaaladaan ay ka qaybgaleen ciidamada Midowga Afrika kuwaas oo ridayey taangiyo la soo dhigay Isogyska Tarabuunka.
Dagaaladaan ayaa waxay sababeen in ay mar kale barakacaan dadkii fara ku tiriska ahaa ee ku horey ugu haray xaafadahaasi, kuwaas oo markii hore la ildarnaa duruufo dhaqale, awoodi waayeyna in ay goobaha ay dagaaladu ka socdaan ka baxsadaan.
Gawaarida Gargaarka Deg-dega ah ayaa isdib-dhaafayey wadooyinka Magaalada Muqdisho, kuwaas oo daadgureynayay dadka dhaawaca ah, waxaana la sheegay in Isbitaalada Muqdisho ay buux dhaafiyeen dad fara badan oo ku dhaawacmay dagaaladii ugu dambeeyey ee mudo labo bilood ah ka socday Magaalada Muqdisho.
Iyadoo Waqtiyadan dambe weriyayaasha Soomaaliyeed ku shaqeynayeen xaalad adag ayaa dagaalkii saakay ka qarxay qaybo ka tirsan Magaalada Muqdisho, waxaa ku dhaawacmay saddex weriye oo ka tirsan Idaacadaha Magaalada Muqdisho, waxayna weriyaashaan kala yihiin, Ismaaciil Guuleed Istiila oo u hadla Idaacadda SIMBA, C/Xakiim Ibraahim Cawaale oo ka tiran Idaacadda Xurmo iyo weriye kale oo u shaqeeya Idaacadda Horseed ee Magaalada Boosaaso, waxaana weriyaashaan ku dhacay Madfac mar ay Sawiro ka qaadanayeen Dagaalkii saakay ciidamada Dowladda iyo kooxaha ka soo horjeeda ku dhexmaray Xaafadda Hodan ee Magaalada Muqdisho.
Saddexda Weriye oo haatan lagula tacaalayo Isbitaalka Madiina ayaa waxay ka mid noqday dad fara badan oo iyana saakay ku dhaawacmay dagaalkaasi oo la dhigay Isbitaalka Madiina.
6-dii Bishan ayay ahayd markii Suuqa Bakaaraha lagu dilay Allah u naxariiste Mukhtaar Max'ed Hiraabe oo agaasime ka ahaa Idaacadda Shabeele. Afartii February ee isla Sanadkaan waxaa la dilay Agaasimihii Idaacadda Hornafrik Siciid tahliis, waxaa kale oo sanadkaan la dilay Weriye Xasan Mayow Xasan iyo C/risaaq Warsame (Gaadaco) oo u shaqeynayey Idaacadda Shabele
Maalinta Caruurta Afrika oo laga xusey Magaalada Muqdisho
Drs Qamar Aadan � Waxaa Dowladda Ka Go�an in ay daryeel u fidiso Caruurta Dhibaateysan�
Talaadiadii oo ku beegan 16-ka Juun waa maalinta caruurta Afrika, waxayna maalinta astaan u tahay sidii caruurta looga saari lahaa dhibaatooyinka, waxaana qaaradda Afrika ka dhaca barnaamijyo fara badan oo looga hadlayo daryeelka carruurta, gaar ahaan siday u heli lahaayeen, waxbarasho, caafimaad iyo adeegyo kale.
Somalia oo ka mid ah Qaaradda Afrika ayaa waxaa maanta ka dhacay xarunta wasaaradda caafimaadka ee dowladda Somalia munaasabad lagu xusayay maalintan, waxaana kasoo qaybgalay afar wasaaradood oo kala ah:
Wasaaradda Caafimaadka, Wasaaradda Dhaqancelinta iyo daryeelka naafada, Wasaaradda Bani�aadamnimada iyo dib u dajinta iyo wasaaradda dib u dhiska, waxayna afartan wasaaradood ay sheegeen in caruurta Afrika ay haystaan dhibaatooyin aad u badan, siiba Somalia.
Mss. Qamar Aadan Cali oo ah wasiirrka wasaaradda caafimaadka oo ugu horreyn kulankan ka hadashay ayaa waxay sheegtay in 16-ka Juun ay tahay maalin ku weyn qaaradda Afrika, waxayna sheegtay in caruurta Somalia ay xilligan haystaan waxbarasho la�aan, caafimaad xumo iyo daryeel xumo.
�Caruurta waa ubadkii berri dalka maamuli lahaa, waxaana dowladda ay u qorsheysay inay wax ka badasho xaaladahooda nololeed, si ay u noqdaan kuwo niyad ahaan iyo jir ahaan u diyaarsan inay dalka wax u taraan� ayay tiri Qamar Aadan Cali.
Wasiirradu waxay sheegtay in caruurta Somalida ay haystaan dhibaatooyin aad u badan, si in loo adeegsado dagaallada, waxaana dowladdu ay waddaan qorshe ku aadan in laga hortago in caruur ka yar 18-sano loo adeegsado dagaallada.
Dr. Xuseen Ceelaabe Faahiye oo ah wasiirka dib u dhiska oo isaguna ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in ubadku ay yihiin ubixii dalka, waxayna dowladdu waddaa qorshayaal ay gacan ku siinayso caruurta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwii ku waxyeeloobay dagaallada.
�Waxaan dib u dhis ku sameynaynaa goobihii waxbarashada, goobihii xanaanada caruurta iyo Jaamacadaha, si loo helo caruur dhanka garaadka ka dhisan oo anfici kara naftooda, ummaddooda iyo adduunka intiisa kale� ayuu yiri Dr. Xuseen Ceelaabe.
Wasiirka Bani�aadamnimada iyo dib u dajinta Somalia Sheekh Maxamuud Garweyne oo isaguna ka hadlay xaflada lagu maamuusayay maalinta caruurta Afrika, ayaa sheegay in xukuumaddu ay ka warhayso caruurta loo adeegsanayo dagaallada.
�Kooxaha dagaalamaya waxay aaminsan yihiin in caruurta ay yihiin geesiyaal aan kasoo laaban halkii loo diro, balse dadka waaweyn ay yihiin kuwo fikiraya oo baqdinin ay ku jirto� ayuu yiri wasiirka oo sharraxaad ka bixinayay sababta keentay in caruurta loo adeegsado dagaallada.
Sidoo kale wasiirku wuxuu ka hadlay caruurta ku dacdareysan Magaalooyinka waaweyn ee dalka, sida kuwa daroogooyin isticmaala iyo kuwa aan helin xuquuqahooda iyo waxbarasho, isagoo sheegay in dowladdu ay waddo qorshayaal ay ku saacidayso dhallaankaas.
Xusas kala duwan oo lagu maamuusayo maalinta Caruurta ayaa ka dhacay Muqdisho, waxaana hay�adihii iyo dadkii ka hadlay ay si weyn uga dayriyeen xalaadda ay ku nool yihiin caruurta Somalia, kaddib dagaallo sokeeye oo muddo dheer socday.